Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeBahrain Breaking » Abaphathi beMiddle East: Ukuhola inkampani yezindiza ngo-2021
Izindiza ezisindayo zase-Middle East u-Thierry Antinori, Waleed Waleed Al Alawi, Abdul Wahab Teffaha
I-Middle East ibambe iqhaza elibalulekile kwezindiza isikhathi eside, kepha bekuvele emashumini eminyaka amuva lapho ichume ngempela. Ishintsha indlela abantu abahamba ngayo emazweni omhlaba, yamukela inguquko yezindleko eziphansi, futhi iyivumelanisa nezidingo zayo zemakethe.
Izindinganiso zezindiza zaseMiddle East ziletha amazinga amasha enduduzo, izinsizakalo, nezinsiza ezisendizeni kubahambi.
Imboni yezindiza embulungeni yonke ishaywe kakhulu yi-COVID-19 nazo zonke izinzuzo zayo.
Ezinyangeni ezi-5 zokuqala zika-2021, amazinga omthamo ayehle cishe ngesigamu uma kuqhathaniswa namazinga wangaphambi kobhadane.
Imininingwane ye-IATA yethrafikhi kaMashi 2021 ikhombise ukuthi umthamo wehle ngamaphesenti angama-80 uma kuqhathaniswa noMashi 2019. Ukululama kuyenzeka, futhi umhlaba wonke usuqala ukuvuleka, kodwa umgwaqo ongaphambili usalokhu uyinselelo.
Kamuva I-CAPA - Isikhungo Sezindiza umcimbi obukhoma, uRichard Maslen, Umhleli Wokuqukethwe wase-Europe we-CAPA, uthe: "Akunakuphikwa ukuhola kunoma iyiphi ingxenye yebhanoyi ngo-2021, 2022, ngisho nangaphambili, kuzobukeka kwehluke kakhulu kunakuqala."
Funda ku - noma ulalele - le ngxoxo efundisayo futhi efike ngesikhathi nge Ukundiza kwezindiza eMiddle East abashayeli abasindayo be-Arab Air Carriers Organisation (AACO) uNobhala Jikelele u-Abdul Wahab Teffaha, Isikhulu Esiphezulu Sezinguquko eQatar Airways u-Thiery Antinori, kanye no-CEO we-Gulf Air Acting Waleed Al Alawi.
Umthelela we-COVID-19 ufune ukuthi zonke izindiza zihlole kabusha izinqubo zazo, zisungule futhi zijwayele ukuhleleka komhlaba omusha. Iphaneli yethu ejwayelekile yokucabanga ukuthi le nyanga ifike empumalanga emaphakathi futhi siyajabula ukujoyina uMnu. Abdul Wahab Teffaha, uNobhala Jikelele we-Arab Air Carriers Organisation, uMnu Thiery Antinori, umphathi omkhulu wezohwebo eQatar airways, kanye noMnu. UWaleed Al Alawi, oyibamba le-CEO yeGulf Air. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuqala, ukuthola ukuqonda kwendawo yangakini nokuthi ishaywe kanjani yi-COVID kulezi zinyanga eziyi-18 ezedlule. Ngakho-ke Mnu. Abdul Wahab Teffaha, ungasinikeza nje isingeniso esifushane sokuthi izimpi eziphakathi nendawo nezindiza zase-Arab zishaywe kanjani yi-COVID nokuthi sinjani isimo njengamanje?
Ikhasinkomba 1 of 5 Okwangaphambilini Olandelayo
I-Airbus ikhiphe i-oda elikhulu lendiza entsha evela eQatar Airways January 21, 2022